FANDROBANA SY FANOLANANA MASERA : Nampidirina am-ponja ireo 30 mianadahy voarohirohy
Nanaitra ny maro ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana mikasika ny raharaha fandrobana ny masera sy fanolanana mpianatra sy vahiny mpilatsaka an-tsitrapo tany Antsahatanteraka... 15 avril 2017
Kaominina Andranomanelatra, Distrikan’Antsarabe II, Faritra Vakinankaratra niseho 31 marsa hifoha 1 avrily lasa teo iny.
Ny alakamisy teo no niakatra Fampanoavana ireo 30 mianadahy voarohirohy ary notazonina am-ponja vonjimaika avokoa izy ireo miandry ny fitsarana azy.
Nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ny fihainoan’ny Mpitsara mpanao famotorana azy 30 mianadahy ireo ary tsy nifarana izany raha tsy tany amin’ny 4 ora hariva tany ho any. Tonga maro teny an-toeraa niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana ihany koa ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny Emmo/Reg.
Vaky trano miampy fandrobana, fandratrana an-tsitrapo, fanolanana ary fikambanana asan-jiolahy no vesatra niampangana azy ireo. Andro maromaro no nitazonana azy ireo hatao fanadihadiana tao amin’ny paositry ny Polisy sy ny Zandary izay nandray an-tanana ny raharaha. Raha ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana dia sarotra ny fanadihadiana ka izany no nampaharitra ela ny fanadihadihana.
Naneho ny alahelony ary nampiaka-peo ny fianakavian’ireo voarohirohy mikasika ny fisamborana ny havany ary nanangana sora-baventy teo anoloan’ny Tribonaly Antsirabe. “Avoahy ny zanakay izay tsy meloka ary gadrao izay nahavita heloka !”, hoy izy ireo. Tsy ampy hoy izy ireo ny fanadihadihana nataon’ny mpitandro filaminana satria toa tsy mba nohenoina akory ny vavolombelona.
Voafatotry ny hetim-bolo
Raha ny fanazavan’ny olona sasany dia misy tamin’izy ireo no nanana porofo fa niasa tamin’ny fotoana nitrangan’ny asan-jiolahy saingy tsy nohenoina akory ireo vavolombelona nanamarina izany. Misy tamin’ireo voasambotra ihany koa no mbola tsy feno 18 taona saingy noho izy manao hetim-bolo lamaody amin’izao fotoana izao no antony nisamboran’ny mpitandro filaminana azy.
Vehivavy mitondra vohoka ny iray amin’ireo voarohirohy ireo ary izy irery no vehivavy nosamborina. Na dia teo aza izany antsoantsoan’ny olona izany dia tsy nampiova ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana amin’ny fampidirana am-ponja vonjimaika ireo rehetra izay voarohirohy izy ireo.
Tonga nanatrika ity fanadihadiana lalina nataon’ny Fitsarana ity ihany koa ireo Masera sy mpianatra niharam-boina ary izy ireo no nanamafy na manila izay olona heverina fa nahavita izany asan-jiolahy feno habibiana izany. Tsy nisaron-tava mantsy ireo jiolahy teo am-panatanterahana ny asa ratsiny ka tadidin’ireo niharam-boina tsara ny endriny. Fa ankoatra izay, mikasika an’i Kelimaso lehilahy iray izay voalaza fa voatifitry ny mpitandro ny filaminana teo am-pitsoahana dia voalaza olona marary saina izy io.
Tetsy an-kilany, nahagaga ny mponina manodidina ny fokontany Antsahatanteraka ihany koa ny tsy mba nisamborana na nanaovana fanadihadihana ireo olona mipetraka amin’ny Kaominina manodidina. Fantatry ny mpitandro filaminana tsara anefa fa manana namana I Kelimaso, dia i Njato any Ambohimiarivo, Dajabe avy any Ampitanketsa Ambihidranandriana Kaominina Ambohimariavo, Tôfibe avy any Ambohijanaka Ambohidranandriana, Koto Kely sy Tita ary Le Mödy izay samy avy ao amin’ny fokontany Ambohimena, Ambohimasy Kaominina Ambanivohitra Ambohimiarivo, Le Siza kely Ambohijanandriana. Raha ny fanazavana ihany dia anisan’ny olona ahiahiana ho jiolahy ihany koa izy ireo ary mampitondra faisana ny tanàna manodidina azy.